Ikhefi kunye negadi · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Ikhefi kumgangatho osezantsi
SIZE: 100 yeemitha zesikwere sendawo yomsitho
UKUSEBENZA: indawo ephezulu yokuhlala abantu abangama-70; Impahla eguqukayo kunye nezihlalo
UKUSETYENZISWA: Ikhefi eguquguqukayo, ilungele amaqela abucala, umculo omncinci kunye / okanye umboniso wentsebenzo, ngokuhlwa kwefilimu, iminyhadala yamagama nokunye okuninzi.
I-cafe ekumgangatho ongaphantsi iqhutywa ngumqeshi kwaye ibonelela ngendlu yonke yokutya i-vegan-imifuno, eyenziwe ngothando. Ngale ndlela, zonke izicelo zomnyhadala zinokuhamba kunye neqela lethu kunye namaqabane. Sazise ukuba ithini iminqweno yakho!
Igadi ebanzi ibonelela ngendawo eninzi yokuhlanjwa lilanga kunye nokuphumla emthunzini, kwaye inokujikwa kwiminyhadala enje ngeetafile zentenetya yetafile, iikonsathi, imidaniso, imitshato, imihla yokuzalwa nokunye. Igadi encinci kodwa entle yoluntu iya konwaba abancinci nabadala.
Indawo yokungena kwindawo yokupaka
Indawo yokupaka kunye nendlu yesango
Isithuba phakathi kokungena nekhawuntara
SIZE: I-300 yeemitha zesikwere sendawo eluhlaza (imiphezulu eyahlukeneyo)
UKUSEBENZA: ubuninzi bokuhlala abantu abangama-80; Ukuhlala okungafaniyo kunye neambrela
Ukuba ungathanda ukubhukisha le ndawo yokutyela okanye igadi, ungaqhagamshelana nathi apha.
Isihloko: igumbi lenqabaIsihloko: iholoIsihloko: igumbi elikhulu leseminaIsihloko: Igumbi lesemina encinciIsihloko: Kumgangatho wokuqala weFoyerIsihloko: Ikhefi / i-EGIsihloko: igadiIsihloko: IklabhuIsihloko: Enye okanye ngaphezulu